Zoom H6 ကို Mevo သို့ Audio Interface အနေဖြင့်အသုံးပြုနည်း | Martech Zone
သင်၏ Zoom H6 ကို Mevo သို့ Audio Interface အဖြစ်အသုံးပြုနည်း
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 25, 2019 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 25, 2019 Douglas Karr
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်စာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးတစ်ခုခုကိုသင်မှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်ခင်မှာအမှားအယွင်းများစွာလိုအပ်သည်။ ငါ၏အဖောက်သည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဒေတာစင်တာ သူတို့ကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်တိုင်းပြည် ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုရံဖန်ရံခါတွန်းအားပေးနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်လိုသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်အခြားကြားခံများမှတဆင့်အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များအားပိုမိုတန်ဖိုးပေးနိုင်သည်။
စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်အချို့ကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်အချို့သောလိုက်နာမှုနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုရံဖန်ရံခါပေးရုံမျှဖြင့်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် podcasts တွေကိုအသံသွင်းခြင်း၊ ဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းစသောစတူဒီယိုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကူညီခဲ့တယ်။
သူတို့မှာကြီးမားတဲ့ boardroom ရှိတယ်၊ ငါကနေရာတစ်ခုကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ အသံကိုကန့်လန့်ဖြတ်ဖို့အသံကုလားကာတွေနဲ့ချည်တယ်။ ငါ Semi- ခရီးဆောင် setup ကိုအတူသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Live-streaming ကင်မရာ Mevoတစ်ဦး ချဲ့ကြည့်ပါ H6 အသံဖမ်းနှင့် ကြိုးမဲ့ Shure lavalier မိုက်ခရိုဖုန်း။ ဆိုလိုတာကငါဘုတ်အဖွဲ့စားပွဲကနေထိုင်နေတဲ့toရိယာနဲ့အကြားမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးအထိငါမှတ်တမ်းတင်ဖို့မရေမတွက်နိုင်သောareasရိယာများ၌ set up နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရလိုက်တာနဲ့ပြissuesနာတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ Zoom H6 နှင့် Shure စနစ်သည်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိပဲအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Zoom H6 ကို Mevo သို့ audio interface အဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။
Zoom H6 နှင့် Mevo Boost
ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တစ်ခုမှာ streaming အတွက်ကွန်ယက်မှချိတ်ဆက်နိုင်သည့် USB နှင့် audio အတွက်ပါ ၀ င်သည့် Mevo Boost နှင့်ပါဝါနှင့်တိုးချဲ့ထားသောဘက်ထရီပါ ၀ င်သော Mevo Boost ကိုသင်လုံးဝအသုံးပြုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါစနစ်ကတစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေစမ်းသပ်ပြီး ... ထံမှအချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစပါးကျန်ကိုကောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် Mevo ၏ကန့်သတ်စာရွက်စာတမ်းများ သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည့်အရာ Zoom ကို H4n နှင့် H6 ကိုပြသသည်။
Zoom H6 ကို USB မှတဆင့် Mevo Boost သို့ဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်စု: ၎င်းသည် Zoom H6 (Boo!) ကိုအားသွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုရသည်။
Mevo နှင့် Zoom H6 ကိုဖွင့်ပါ။
Zoom H6 တွင် menu system ကို ဖြတ်၍ ၎င်းကိုထားရန်လိုအပ်သည် အသံ interface ကို ဘို့ Multi- လမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင် ဘို့ PC / Mac ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်.
ဤတွင်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ထားသည် (အထူးသဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြသည့် menu item ကိုအာရုံမစိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အား Zoom H6 လက်စွဲမှဆွဲထုတ်သည်) ။
သင်၏ Zoom H6 ကို Audio Interface အနေဖြင့်အသုံးပြုပါ
သင်သည်သင်၏မိုက်ခရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှုအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် Multi Track ကိုရွေးချယ်ပါ
အရေးကြီး: ဘက်ထရီပါဝါကို သုံး၍ PC / Mac ကိုရွေးချယ်ပါ
Mevo USB ထည့်သွင်းမှု
ယခုတွင်သင်သည် USB ကို Mevo တွင်အသံထည့်သွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ချိတ်ဆက်ရန်သာထိပုတ်ပါ၊
ဘေးထွက်သတိပေးချက်အရ Zoom H4n အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအရအသံထွက်ရှိမှုသည် 44kHz အစား 48kHz ဖြစ်သင့်သည်။ Zoom H6 မှာ USB audio interface အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ output ရဲ့ကြိမ်နှုန်းကိုငါမပြုပြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သငျသညျကိုဘယ်လိုသိလျှင်ငါ့ကိုသိပါစေ! ၄၈kHz အမြန်နှုန်းနဲ့အသံအရမ်းကောင်းတာကြောင့်ဒါကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။
ထုတ်ဖော်: ငါသည်ဤပို့စ်၌ငါ့အမေဇုံ Affiliate codes တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Tags: mevomevo boost ကိုshureh6 ကိုချဲ့ပါ
SaaS Platforms ကြီးထွားရန်အတွက်ထိပ်တန်းနည်းဗျူဟာများမှာအဘယ်နည်း
သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန် Ultimate Guide